Lenovo Z5: Nanamafy ny datin'ny famelabelarana tamin'ny 5 Jona | Androidsis
Ny Lenovo Z5 dia haseho amin'ny 5 Jona
Eder Ferreno | | Lenovo
Lenovo dia marika iray izay very very eny an-tsena amin'ny hafainganam-pandeha haingana. Saingy tsy midika akory izany fa hijanona tsy hamokatra telefaona intsony izy ireo, satria afaka herinandro dia ho fantatsika ny fitaovan'izy ireo vaovao. Ity no Lenovo Z5, izay raha ny filazan'ny sasany dia mety ny ZUK Z5. Fitaovana toa namboarina ho filoham-pirenena vaovao.
Ity Lenovo Z5 ity dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 5 Jona amin'ny hetsika any Beijing. Ilay orinasa mihitsy dia efa nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tambajotra sosialy sinoa Weibo. Fotoana iray lehibe, satria manantena ny handresy ny tsena amin'ity modely vaovao ity izy ireo.
Vitsy dia vitsy ny antsipiriany naseho tamin'ny telefaona tato anatin'ireto herinandro ireto. Ny orinasa mihitsy dia nanambara antsipiriany vitsivitsy toy ny sarisary amin'ny telefaona. Izany rehetra izany dia misy hevitra hiteraka fahalianana amin'ity Lenovo Z5 ity. Ity maodely ity izay mampanantena fa tena efijery rehetra.
Hatramin'ity fitaovana ity ny efijery dia hibodo ny 95% eo alohan'ny fitaovana. Zavatra iray izay azo jerena tsara amin'ny kisarisary nasehoan'ny marika. Ka amin'ny resaka famolavolana dia mampanantena ny telefaona hisarika ny saina eny an-tsena. Zara raha misy fitaovana miaraka amina endrika mitovy aminy.
Ankoatra izany, Mampanantena ity Lenovo Z5 ity fa ho fanavaozana ny marika, izay tsy mbola fantatra noho ny fanavaozana na ny famolavolana tany, indrindra amin'ny resaka efijery. Fanovana ilaina hitazomana ny fahalianan'ny mpanjifa ary manandrana maka varotra amin'i Xiaomi sy Huawei amin'ny tsena sinoa.
Ity hetsika fampisehoana ofisialy ity dia atao amin'ny 5 Jona. Azo inoana fa azo arahana mivantana ilay hetsika. Na dia tena azo inoana aza fa alohan'ny fampisehoana dia misy ny antsipiriany fanampiny momba ity Lenovo Z5 ity. Finday izay mampanantena fa manan-danja lehibe amin'ny marika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Ny Lenovo Z5 dia haseho amin'ny 5 Jona
Samsung dia namoaka ny fanavaozana ny fiarovana an'i May ho an'ny Galaxy Note 8